Adịkwa Christmas 2018 na Obi ụtọ na New Year 2019 na niile enyi
site ha na 18-12-22
Adịkwa Christmas 2018 na Obi ụtọ na New Year 2019 na niile enyi, olileanya na ị na-enwe gị mma ezumike!
site ha na 18-10-23
Gịnị bụ ihuenyo Obibi?
Gịnị bụ ihuenyo Obibi? Screen ebi akwụkwọ bụ a mmiri usoro nke ewepụghị ma ọ bụ cylindrical plastic, iko, metal, ma ọ bụ osisi akụkụ nwere ike mma. Images na-agafere na na na akụkụ site na ịpị ink ezie na image "ọkụ" n'ime a na ihuenyo. N'ihi na ma ewepụghị na ihuenyo-ebi akwụkwọ na cylindrical scre ...
Malite Screen Obibi
Isiokwu a na-ewebata ndị ngwa ngwa ndu T-uwe elu na ihuenyo-ebi akwụkwọ usoro na 7 nzọụkwụ, cylinder ihuenyo-ebi akwụkwọ nwere otu ụkpụrụ a mgbe ibi akwụkwọ cylindrical mkpụrụ. Maka ozi ọzọ, i nwere ike pịa njikọ: https://wickedprintingstuff.wordpress.com/screenprinting/